आविष्कार - बम डिस्पोजलपछि मनिष जोशीले ड्रोन उडाए
वल्र्डलिंकको ‘अफर जम्बो खर्च कम भो’ नामक अफरको सुरुवात
काठमाडौं । वल्र्डलिंकले आफ्ना ग्राहकहरुकालागि नयाँ नयाँ अफरहरु प्रदान गर्ने निरन्तरता कायम राख्दै अफर जम्बो खर्च कम भो नामक अफरको सुरुवात गरेको छ । जस अन्र्तगत ग्राहकहरुले ६ महिनाको इन्टरनेट खरिद गर्दा ६ महिनाको नेट टिभीका साथ साथै निशुल्क सेटअपबक्स पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस अफर अन्र्तगत २० एमबिपीएस अनलिमिटेड इन्टरनेटको लागी रु. ८४००, ३० एमबिपीएस अनलिमिटेड इन्टरनेटको लागी रु. ९६३० र ५० एमबिपीएस अनलिमिटेड इन्टरनेटको लागी रु. १२१५० अग्रिम रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुनेछ । यो अफर भाद्र मसान्तसम्मको लागि मात्र लागू गरिएको वल्र्डलिंकले जानकारी दिएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
चाँडै नै नेपाली भाषामा इन्टरनेटको डोमेन
काठमाडौं । इन्टरनेटमा कुनै सामग्री हेर्नुपर्दा वा कुनै वेवसाइटमा जान पर्दा अंग्रेजी भाषामा डोमेन नेम हान्नुपर्छ । तर, चाँडै नै नेपाली भाषामा पनि इन्टरनेटको डोमेन नेम उपलब्ध हुने भएको छ । विश्वभर इन्टरनेटको डोमेन नेम सिस्टम ९डीएनएस० व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको संस्था ‘इन्टरनेट कर्पोरेशन फर एसाइन्ड नेम्स एण्ड नम्बर्स’ ९आईसीएएनएन० दक्षिण एसियामा धेरै बोलिने ९ भाषाका विभिन्न लिपीमा इन्टरनेट डोमेन नेम उपलब्ध गराउने तयारीमा जुटेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
एकै पटक २ हजार १८ ड्रोन इन्टेलले उडायो
काठमाडौं । कम्प्युटर प्रोसेसर निर्माता इन्टेलले आफ्नो ५०औं जन्मोत्सवको अवसरमा पारेर एकै पटक २ हजार १८ ड्रोन हावामा उडाएर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा गरिएको उक्त प्रदर्शनमा सुटिङ स्टार ड्रोनको प्रयोग गरिएको थियो, जसको तल्लो भागमा एलईडी लाइट राखिएको थियो । मानिसहरूले उक्त दृश्यलाई विशाल आतिशबाजी जस्तो मानेका थिए, तर रिमोट कन्ट्रोलको सहयोगले उडेको इन्टेलको ड्रोन भन्ने थाहा पाए पछि सबै अचम्मित भएका थिए । यी सबै ड्रोनमा प्लास्टिक तथा फोम प्रयोग गरिएको छ । प्रत्येक ड्रोनको वजन केवल २ सय ८३ ग्राम छ ।	थप पढ्नुहोस्
सर्पको टोकाईबाट बच्न एन्टीभेनम सुई वितरण !
हेटौँडा । प्रदेश नं २ का तराईका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा तथा प्रदेश नं ३ का सिन्धुली र चितवनमा वर्षात् र गर्मीको प्रकोपले सर्पदंश बढेकाले एन्टीभेनम सुई उपलब्ध गराइएको छ । ती दुवै प्रदेशका जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा सर्पदंशबाट प्रभावित व्यक्तिलाई तत्काल उपचार गनै एन्टीभेनम सुईको भायल शुक्रबार उपलब्ध गराइएकोे क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर हेटौँडाले जनाएको छ । एन्टीभेनम सुई १५० देखि बढीमा ८०० भायलसम्म सम्बन्धित जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी र प्राथमिक उपचार केन्द्रमा पठाइएको मेडिकल स्टोरका प्रमुख रमण झाले बताए ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । शुक्रबार भोली नेपाली बजारमा हुवावे नोभा सिरिज अन्तर्गतका दुई फोन सार्वजनिक हुने भएका छन् । चिनियाँ फोन उत्पादक कम्पनी हुवावेले नेपाली बजारमा नोभा सिरिज अन्तर्गतका नोभा थ्री तथा नोभा थ्री आई एक साथ सार्वजनिक गर्न लागेको हो। भोलि सार्वजनिक हुने यी स्मार्टफोनमा एउटा अल क्वाड क्यामरा तथा शक्तिशाली प्रणाली ९एसओसी० जडान गरिएको छ। नोभा थ्री तथा नोभा थ्री आईमा उच्च क्षमताका क्यामराहरू जडान गरिनुका साथै आर्टििफसियल इन्टेलिजन्स ९एआई० प्रणाली जडित रहेको कम्पनीले जानाकारी गराएको छ। दुवै फोनहरुमा दुईवटा फ्रन्ट क्यामराहरु छन् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिने ‘भूमि सुशासन’ नामक एप्स प्रयोगमा ल्याएको छ। एप्समा मन्त्रालयका भूमि सम्बन्धी सेवाहरूको सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध हुने बताइएको छ। भूमि सम्बन्धी कानुन, भूमि नापचाँज सम्बन्धी जानकारी समेटिएको यो एप नक्सा नामक कम्पनीले विकसित गरेको हो। एप्समा मालपोत, नापीलगायतका कार्यालयमा दिइने निवेदनका ढाँचा डाउनलोड गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सामान्य नागरिकले भोग्ने जग्गा सम्बन्धी समस्यालाई एप्सले समाधान गर्ने प्रयास गरेको मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले बताए ।	थप पढ्नुहोस्
श्रीमानद्वारा खुकुरी प्रहार गरी ...
आइतबार शेयर बजार ६ अङ्कले ...